बाटोमा ओई !भिलेन’भनेर बोलाउँछन्:प्रमोद अग्रहरि - Mountain Media
बाटोमा ओई !भिलेन’भनेर बोलाउँछन्:प्रमोद अग्रहरि
अभिनेता प्रमोद अग्रहरिले हालै १० औं नेफ्टा अवार्डको ‘उत्कृष्ट नेगिटिभ’ विधामा सफल्ता चुमे । यसअघि कामना अवार्डमा ‘कथा काठमाडौं’ बाट ‘उत्कृष्ट भिलेन’को अवार्ड पनि उनले नै पाएका थिए । एउटै फिल्मबाट दुईवटा अवार्डमा प्रमोद उत्कृष्ट ‘भिलेन’ ठहरिए ।
म्युजिक भिडियो हुँदै एनएसडी (नेसनल स्कुल अफ ड्रामा) सम्म पुगेका प्रमोदले १२ वटा फिल्ममा भिलेनको भूमिका निभाइसकेका छन् । ‘भिलेन’ चरित्रकै विषय वरपर रहेर प्रमोद अग्रहरिसँग रीना मोक्तानले गरेको कुराकानी :
तपाईंलाई ‘भिलेन’ बनेकै रुचाउँदा रहेछन् है ?
मेरा लागि त ‘भिलेन’ पनि एउटा चरित्र नै हो । मेरो काम त्यो चरित्रलाई बाँच्ने हो । मेरो लागि ‘हिरो’ पनि चरित्र नै हो । अफर आएको कामलाई कसरी राम्रो गरौं भन्ने हुन्छ मलाई । यो ‘हिरो’ हो, यसको चरित्र यस्तो हो भन्नेतिर मेरो ध्यान जाँदैन । कसरी हुन्छ आफूले पाएको चरित्रमा ‘बेस्ट’ दिउँ भन्ने हुन्छ । आखिरमा हरेक चरित्रबाट आफूले सिक्ने र भोग्ने त हो ।
सायद उहाँहरुले त्यसरी नै देख्नभयो होला मलाई । कास्टिङ गर्नेहरुले पनि ‘भिलेन’मै कास्ट गरिदिनुहुन्छ । सायद त्यसलाई ब्रेक गर्न नखोज्नु भएको पनि हुन सक्छ । मेरो लुक्सले गर्दा पनि मलाई यस्तो चरित्रमा लिन्छन् जस्तो लाग्छ । हेर्दा कालो छु । दाह्री, ठूल्ठूला आँखा भएकोले पनि उहाँहरू मलाई ‘भिलेन’जस्तो देख्नुहुन्छ होला ।
१२ वटा फिल्ममा भिलेनकै भूमिका निभाउनुभयो । ‘भिलेन’को ट्याग बोकिरहन दिक्क लाग्दैन ?
‘कथा काठमाडौं’को बेलामा कतिले इमरान हासमी भने । बाटोमा हिँड्दा कतिले ‘छक्का पञ्जा’को ‘बाबा मस्तमौला’ भनिरहेका हुन्छन् । मलाई त्यसले खासै फरक परेन । म प्रमोद अग्रहरि हुँ र मलाई प्रमोद भएरै काम गर्न मनपर्छ । ट्याग भन्ने कुरा दर्शक र फ्यानहरुले दिने कुरा हुन् । यसको अर्थ त दर्शकले नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो । नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्मलाई मन पराइदिनु खुसीको कुरा हो ।
‘भिलेन’ बनेका मध्ये कुन भूमिका तपाईंलाई मनपर्छ ?
‘जाइरा’ प्रदर्शनपछि कतिले मलाई ‘राजा’ भनेर बोलाए । कलाकारलाई आफ्नो कामबाट सन्तुष्टि कहिल्यै हुँदैन । सन्तुष्टि भयो भने उसको अर्को यात्रा नै हुँदैन । दर्शकले मेरो कामलाई मनपराइदिनु भएको छ, म खुसी छु । मेरो काम मन नपराइदिनु भएको भए म इन्डस्ट्रीमै टिक्दिन थिएँ होला । आफूले गरिसकेको भूमिकामा अझ राम्रो गरेको भए हुने भन्ने खालको अनुभव हुन्छ सधैं । त्यो किसिमको असन्तुष्टि हुँदो रहेछ कलाकारमा ।
२ दिन अगाडि पिपुल्स प्लाजामा पुगेको थिएँ । मास्क लगाएर एलिभेटर चढेर माथि उक्लँदै गर्दा कसैले ‘ओई ! भिलेन’ भनेर ठूलो आवाजमा बोलायो । मलाई होइन होला भन्ने लाग्यो त्यसैले सरासर अघि बढेँ । माथिल्लो तल्ला पुगेपछि अर्को कुनाबाट ‘ओई ! भिलेन’ भनेर आवाज आयो । पछि फर्कँदा आवाज दिनेहरुसँग बसेर गफ पनि गरेँ । म आफूलाई लुकाएर हिँड्ने मान्छे, कसैले नचिनोस्‌जस्तो लाग्छ ।
मेरो कामबाट मलाई चिनोस् भन्ने लाग्छ ।आफ्नो अनुहार चिनाउँदै हिँड्न मन लाग्दैन । अस्ति भर्खर पेप्सीकोलाबाट फर्कँदै गर्दा रातो बत्तीमा रोकिएको थिएँ । मेरो अगाडिबाट एकजना पानी बेच्ने बालक छेउतिर गयो । पछि फेरि म नजिक आएर ‘सर नमस्ते अस्ति तपाईंले अवार्ड पाउनु भयो है’ भन्यो । मलाई एकदम अचम्म लाग्यो । अरे यो बालकले मैले अवार्ड पाएको कुरा कसरी थाहा पायो भन्ने लाग्यो । मनमनै खुसी थिएँ । मैले भाइसँग पानी पनि किनें । उसले मेरा सबै फिल्म हेर्ने गरेको सुनायो । मलाई मेरो कामले यसरी चिनोस् भन्ने लाग्छ ।
छैन । कति त कथा मन नपरेर गरिनँ । म मेरो पात्रले समाजमा पार्ने प्रभाव के हो ? त्यसले दर्शकमा दिने सन्देश बुझेर मात्र फिल्म गर्न तयार हुन्छु । मैले गर्ने भिलेनको चरित्र समाजमा पनि छन् कि छैनन् ? छन् भने त्यस्ता व्यक्तिबाट सतर्क बनाउन मैले त्यो भूमिका निभाइरहेको हुन्छु । ‘कथा काठमाडौं’ को ‘स्वरूप’ र ‘जाइरा’को ‘राजा’को चरित्र समाजमा पनि छन् । समाजका यस्ता वास्तविक पात्रबाट बच्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले ती भूमिका निर्वाह गरेको हुँ ।
जुनसुकै क्षेत्रमा जसले नराम्रो काम गर्छ त्यो भिलेन हो । त्यो पुजारी पनि हुनसक्छ, आफ्नै बाउ हुनसक्छ । आमा पनि हुन सक्छ । तपाईंलाई भात मनपर्छ । मलाई मनपर्दैन । त्यो मेरा लागि त नकारात्मक कुरा हो । समाजमा हेर्ने हो भने त जताततै देखिन्छ नकारात्मकता । आफ्नै घरमा हामी देख्छौं । त्यही कुरालाई फिल्ममा ‘भिलेन’मार्फत देखाइन्छ । त्यसैले त फिल्मलाई समाजको ऐना र राजनीतिक वक्तव्य भन्ने गरिन्छ ।
समाजको भिलेन सायद हामी नै हौं । हामीले हाम्रो समाज कस्तो निर्माण गर्‍यौं । हामीले हाम्रो समाज कस्तो देख्छौं भन्ने कुरा न हो । कतै बम पड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कतै बलात्कृत भयो भन्ने सुनिन्छ । यी कुराहरु आखिर के हुन् त ? हामीभित्र नै यो स्वभाव छ नि होइन । मैले पाँच दिनदेखि खाना आएको छैन रे । एकदमै भोकाएको छु । मसँग पैसा छैन । मैले कसैको खाना चोरेर खाएँ । मैले जसको खानेकुरा चोरेर खाएँ त्यो व्यक्तिका लागि म ‘भिलेन’ भएँ नि त । त्यसैले हामी मानव नै समाजका भिलेन हौं ।
मेरा लागि इन्डस्ट्रीमा ‘भिलेन’ छैनन् । हामी त कसरी हुन्छ इन्डस्ट्रीलाई राम्रो बनाऔँ भन्ने हिसाबले मिलेर अघि बढ्ने हो । जहाँ १० ओटा भाँडा हुन्छ, भाँडा ठोक्किन्छ नै । इन्डस्ट्रीमा फरक सोच र विचार बोकेका मानिसहरु छन् ।
किन कलाकारलाई कलाकारको रुपमा लिइँदैन् ।’भिलेन’,’हिरो’को ट्याग दिनैपर्छ ?
ठीक छ । भाषा र बुझाइको कुरा हो । ‘भिलेन’ एउटा शीर्षक न हो ।
‘भिलेन’को टाइटल कहिलेसम्म बोकी हिँड्ने हो ?
दयाहाङ राई र विपिन कार्कीले इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि रहेको ‘हिरो’को मापदण्ड तोडिदिए । तर तपाईंलाई किन अझै ‘हिरो’को रुपमा लिन सकिरहेका छैनन् ?
त्यो कथा लेख्ने लेखकको बुझाइको कुरा हो जस्तो लाग्छ । जबसम्म तपाईं समाज बुझ्नुहुन्न, तबसम्म लेखकले लेखेको कुरामा यी कुराहरु आइरहनेछन् । हाम्रा कथाहरुमा अध्ययन अनुसन्धान पुग्दैन । मलाई लाग्छ तराईको पात्रलाई हिरो बनाएको पहिलो फिल्म नै ‘उमा’हो । त्यो भन्दा अगाडिको फिल्ममा तराईको पात्रलाई मजाक पात्रको रुपमा देखाइन्थ्यो ।
छातीसम्म पुगेको दाह्री, नाकमा बुलाकी । के यो तपाईंको आगामी फिल्म ‘ए फर एप्पल’को भिलेन लुक्स हो ?
घट्यो सुनको भाउ,कतिमा हुँदैछ कारोबार (हेर्नुहोस)
चियावाली श्रृष्टिलाई अलपत्र पार्ने उनका श्रीमानका बारेमा खुल्यो अर्को ठूलो रहस्य [भिडियो हेर्नुहोस]